Puntland & Jubbaland oo markale shuruud ku xiray ka qeyb-galka shirka uu ku baaqay Farmaajo - Awdinle Online
Puntland & Jubbaland oo markale shuruud ku xiray ka qeyb-galka shirka uu ku baaqay Farmaajo
Maamulada Puntland iyo jubbaland ayaa waxaa ay ka hadleen xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan Arrimaha doorashooyinka iyo shirkii uu ku dhawaaqay Madaxweynaha uu muddo xileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in walaac laga muujinayo in Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markasta soo saarayo qoraalo, qaadayana tillaabooyin carqaladeynaya dadaalada xalka loogu raadinayo caqabadaha hor taagan geeddi socodka qabsoomidda doorashada Barlamaanka iyo Madaxweynaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in ay u aragto dadaalada ay wadaan Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Midowga Murashaxiinta kuwo u gogol xaaraya jawi ay ku qabsoomi karaan shirar looga wada hadlo qabsoomidda doorasho loo dhan yahay, heshiisna lagu yahay.
Sidoo kale Puntland ayaa shaacisay inay markasta diyaar u tahay ka qaybgalka shirarka xalka loogu raadinayo qabsoomidda doorasho heshiis lagu yahay oo ku qotonta heshiiskii 17 September 2020.
Ugu dambeyn Puntland ayaa markale shuruud ku xirtay ka qeyb-galka shirka uu ku baaqay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyada oo dalbatay in shirka lagu qabto meel amaan ah.
“Puntland waxay soo jeedinaysaa in shirarku ka dhacaan Garoonka diyaaradaha Magaalada Mogadishu, waxayna ka filaysaa Xafiiska Qaramada Midowbay iyo AMISOM inay diyaariyaan goobta iyo amniga shirarka. Dowladda Puntland waxay Wakiilada Beesha Caalamka uga mahad celinaysaa dadaalada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin Dowladda iyo Shacabka Soomaaliya.
Dhinaca kale Madaxweynaha Maamulka Puntland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in uu dhiirigelinayo dadaalada uu wado Ra’iisul Wasaaraha, waqtina la siiyo wada hadalada u dhaxeeya RW Rooble iyo Midowga Musharaxiinta.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka Axmed Madoobe Madaxweynaha Jubbaland ayuu ku sheegay inuu diyaar u yahay ka qeyb galka shirka , hayeeshee ay muhiim tahay in meel amnigeeda lagu kalsoon yahay lagu qabto.
“Jubaland waxay dhiiri gelinaysaa, qabtaana in la tabantaabiyo waqtina la siiyo wada hadalada u dhexeeya RW Rooble iyo midowga musharixiinta. Waxay sidoo kale diyaar u tahay ka qayb galka shir ka dhaca meel amnigeeda lagu kalsoon yahay, gundhigiisuna yahay heshiiskii Sep17 ayaa lagu yiri” Qoraalka Madaxweynaha Jubbaland.
Maamulada Puntland & Jubbaland ayaa dhowr jeer ka baaqday shir kuu ku baaqay Madaxweynaha uu muddo xileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana dowladda soomaaliya ay u eedeeysay labadaasi maamul inay caqabad ku yihiin inay dhacaan doorashooyinka halka Puntland iyo Jubbaland ay dhankooda Madaxda Dowladda ku eedeeyay inay hortaagan yihiin inay dhacdo doorasho loo dhan yahay.
Previous articleDowladda oo Amartay in la xiro Goobaha Waxbarashada & kuwa lagu Caweeyo
Next articleIlhaan Cumar oo Go’aan lama filan ah ka qaadatay dhaxal sugaha Sacuudiga